Yaasiin: Sanado Badan Oo Feker Ah Kadib, Bisha Ramadaan Ayaan Muslimay | Saxafi
Home Arrimaha Islaamka
Yaasiin: Sanado Badan Oo Feker Ah Kadib, Bisha Ramadaan Ayaan Muslimay
Habeenkii 16-aad ee bishan May 2018, waxay ahayd habeen aad uga duwan habeenidii hore marka loo eego dhanka Yaasiin, wuxuuna markii ugu horeysay noloshiisa u soo kacay inuu suxuurto, si uu u soomo.
Faustino waa ardey u dhashey wadanka Rwanda, wuxuuna kulliyada Caafimaadka ka dhigtaa jaamacadda Yuldarem ee magaalada Ankara wadanka Turkiga, sanado badan ayuu ku fakarayay inuu qaato diinta Islaamka, ugu dambeyna Alle ayaa hanuuniyay.
Wuxuu leeyahay “Shan maalmood ka hor bisha Ramadaan ee fadliga leh, waxaan go’aansaday inaan shaaciyo islaamnimadeyda, kadib marxalad dheer oo fakar ah oo qaadatay sanado badan”.
Isagoo sii hadlaya wuxuu leeyahay Faustino oo hadda la baxay Yaasiin “Xaaladeyda way isbedeshay, fakarkeyguna wuu isbedelay, waxaana nolosha ka leeyahay hadaf, waxaan rabaa inaan si dhow u barto Islaamka”.
Yaasiin oo 21 sano jir ah, ayaa waraysi uu siiyay wakaaladda Anaadool wuxuu sheegayaa inuu aad ugu saamoobay xaaladda muslimiinta Turkiga iyo Iimaaniyaatka ay ku dhex noolyihiin, isagoo intaa ku daray in si gaar ah ay u saameeyeen saaxibadiisa Turkida iyo mulsimiinta kale ee la dhigta kulliyada Caafimaadka.
Isagoo ku sugan wadankiisa Ruwanda ayuu minxo waxbarasho ka helay dalka Turkiga, waxaana markaas qoyskiisu uga digeen inuu aado wadankaas, iyagoo sheegaya iney joogaan “kooxo argagaxiso ah”, balse Yaasiin wuu ku adkeystay inuu aado Turkiga, wuxuuna sheegayaa in xasilooni dheeri ah uu dareemay maalintii ugu horeysay oo uu soo caga dhigto garoonka diyaaradaha magaalada Istanbuul.
Yaasiin oo ka sheekeynaya fatradii uu ku noolaa Kigali ayaa leh “Markii aan u wareegtay Kigali, aniga iyo adeerkey ayaa ahaa labada ruux ee masiixiga ka ah xaafadda aan ku nooleyn oo ay u badnaayeen muslimiinta, halkaasna waxaa iiga billowday inaan si dhow u daawado dhaqannada muslimiinta, iyo waajibaatka diini ee ay maalin weliba gutaan”.
Wiilkan dhalinyarada ah ee qaatay diinta Islaamka ayaa sheegaya in saaxibkiisa ay isku wadanka kasoo jeedaan ee lagu magacaabo Rajab kuna soo waxbartay dhulka Xarameynka uu in badan ka saaciday sidii uu ugu dhawaaqi lahaa shahaadateynka.
Diintii hore ee baadilka ahayd uuna heystay ayuu Yaasiin ku tilmaamayaa iney ahayd mid aan qofku dareemeynin inuu Alle u dhowyahay “ Salaadu ma ahayn mid daruuri ah, waxaa laga yaabaa midkeen inaanu salaadda tukan labo isbuuc kudhwaad”.
Mar uu ka hadlayay falcelinta qoyskiisa iyo saaxabadiisii hore ay ka bixiyeen qaadashada diinta Islaamka ayuu leeyahay Yaasiin “Qoyskeygu waxay iila dhaqmaan inaan ahay qof dhalinyaro ah oo toosan, sidaas darteed kama hor imaanayaan go’aannadeyda, waxayna ii muujiyeen iney igu ixtiraamayaan diinta Islaamka ee aan qaatay”.
Yaasiin oo curud u ah laba waalid oo dhalay 5 caruur ah ayaa u rajeeyay walaalihiisa iyo waalidiintiisa iney qaataan diinta Islaamka, wuxuuna ballanqaaday inuu waqti ku bixin doono sidii uu ugu qancin lahaa tallaabadaas.
Maalintii ugu horeysay ee uu soomay ayuu sheegay inuu xanuunsanaa, uuna dareemay oon badan, balse wuxuu leeyahay “ Alle fadligii waan la qabsaday, si caadi ah ayaana hadda u soomaa”.
Hadda wuxuu billaabay Yaasiin inuu barto xuruufta Higaada ee luuqadda Carabiga, si ay ugu suuragasho inuu akhriyo Qur’aanka kariimka. “Gudashada waajibaatka Xajka, iyo inaan barto bulshooyinka muslimiinta ee caalamka waa rajadeyda ugu weyn, waxaana booqan doonaa dhulka Xarameynka” ayuu kusii daray hadalkiisa Yaasiin.
Previous article“Anagu Dagaal Wakhti Dheer Ah Iyo Mid Gaaban Toona Diyaar Uma Nihine Difaac Ayaanu Ku Jiraynaa” Madaxweyne Muuse Biixi
Next articleWasiirka Maaliyadda: Wasiirkii U Horreeyay Ee Yareeyay Kharashaadkii La Lunsan Jiray
Hambalyadda Curashada Bisha Barakaysan Ee Ramadaan
Khilaaf Ka Taagnaa Somalida Soo Gudanaysa Xajka Oo La Xaliyey
Austria Oo Xidhay Masaajidyo Sidoo Kale Tarxiishey Imaamyadoodii
Professor Yoshinori Ohsumi Oo Soo Bandhigay Cilmi-Baadhis Uu Ku Ibo- Furay Mucjisada Soonka
Xujayda Soomaalidda Ah Oo La Tilmaamay In Lacagta Ugu Qaalisan Ee Lagu Xajo Lagu Qaado Goobaha Ugu Hooseeya Oo Noloshoodu Adag tahayna La Dejiyo
Korodhka Muslimiinta Japan Oo Dawladda Dalkaas Ku Khasbay Dhismaha Masaajido Iyo Suuq Islaami Ah
Sheekh Sudaysi Oo Ururka Ikhwaanul Muslimiin Ku Tilmaamay Kuwo Khilaafay Shareecada Islaamka